Karen language driver's manual | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
Fame ၏ RCO ခန်းမ
အဆိုပါနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲအဆိုပါ DVs အစီအစဉ်အဘို့အစတင်နေပြီ, 50,000 ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ for2020 ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်.
ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များငွေပေးချေမှု - လက်ထောက်အလုပ်အကိုင်များဆုံးမဩဝါဒပေးရရှိရန်မည်သို့
စေတနာ့ဝန်ထမ်းအတူတကွနှင့်ဒုက္ခသည်များ - ဒုက္ခသည်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအသစ်တခုဘဝဒီဇိုင်းနိုင်အောင်.
FindHello app ကိုဖြန့်ချိပွဲကျင်းပ
သင့်ရဲ့ GED Get® ဒီပလိုမာလက်မှတ်
အဆိုပါ GED အကြောင်း® စမ်းသပ်
အခမဲ့ GED® prep အတန်းအစား
Karen language driver's manual
Karen language driver’s manual by Naw Tansy
The Refugee Center Online (RCO) ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အသစ်သောအသက်တာကိုတည်ဆောက်ကူညီနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်.
အဆိုပါ RCO မှာအလုပ်အကိုင်များ
2420 NE စန္ဒီ Boulevard, suite 102 လက်ပံ, OR 97232
မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူ RCO Share